Warbixin la xiriirta gudniinka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Warbixin la xiriirta gudniinka
19 000 hablood ayaa halis ugu jira gudniin
La daabacay fredag 16 januari 2015 kl 10.49
38 000 oo isugu jira hablo da'yar iyo haween oo lagula kacay gudniinka noocyadiisa kala duwan ayaa ku dhaqan Sweden, sida ku cad baaritaan xaqiijin ah oo ay soo saartay hayadda hoggaanka bulshada, waxa afkan iswiidhishka lagu yiraahdo Socialstyrelsen.
Khadra Seeraar waa hooyo da' yar. Waxayna ka mid tahay shakhsiyaadka fara ku tiriska ah ee u ololeeya sidii taagerada ey u baahan yihiin loo siin lahaa hablaha iyo haweenka dalkan ku dhaqan oo ey caqabadaha kala soo gudboonaadaan falalkii gudniinnada ee lagu kacay. Mar ay khadra oo indhaha marisay xogta ku qoran war-bixintan ayay sheegtay in farriinta ku qorani tahay mid horeba loo ogsoonaa.
7000 oo ka mid aha tirada 38 000 ee hablahaasi ayey da'doodu ka hooseeysaa da'dii qaan-gaarka, iyadoona ey falka gudniinka la kulmeen intii aaney dalkan iman. Halka dhanka kale sida war-bixinta ku qoran ey dalka sidoo kale ku dhaqan yiiin qiyaastii 19 000 oo hablood oo sida la sheegay ey dhici karto iney halis ugu jiraan ama dhici karto in la gudo. Waa hablaha waddankan ku dhashay oo hooyooyinkood ey ka soo jeedaan asal ahaan waddammada looga dhaqmo gudniinka haweenka. Khadra Seerar gabadheeda sannad jirka ah ayaa ka mid ah tirada 19 000 ee lagu diiwaan-geliyey iney halis ugu jirto gudniinka haweenka waxa lagu magacaabo "Risk zon". Hase yeeshee aanay Khadra Seerar u arg middaa caqabad. Gabadhaydu ma dooran inaan hooyo u noqdo, sida ay hadalka u dhigtay.
War-bixintan gudniinka ey hayaddu soo saartay ayaa markii ugu horeeysay loo istcmaalay oo keliya ereyga iswiidhishka ee "könsstympning", halkii horay looga isticmaali jiray ereyga "omskärelse". Ereyadaasina oo macne ahaan ku kala duwan sawirrada ey dhiibeyaan. Halka afka soomaaliga inta badan loo isticmaalo ereyga "gudniin" wiilasha iyo hablahaba. Khadra Seerar ayaa sheegtay inay aamin-san tahay in loo baahan yahay in luuqadda soomaaliga loo helo erey ka duwan gudniinka ee sharraxaya caqabadda hablaha la soo gudboonaata.